भारतले फेरी दियो धोका – नेपालसँग भइसकेको सहमतिबाट पछाडि हट्यो भारत, हेर्नुहोस के थियो सहमति ? – ABC NEWS 24
भारतले फेरी दियो धोका – नेपालसँग भइसकेको सहमतिबाट पछाडि हट्यो भारत, हेर्नुहोस के थियो सहमति ?
वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिउँदको अभावका बेला ल्याउने नेपाली अधिकारीहरुको प्रस्तावमा भारतले आलटाल गरेको छ। गत शुक्रबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरको आठौं बैठकले इनर्जी ब्यांकिङ र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नेपालको मुख्य सरोकारमा ठोस सहमति गरेन। बरु, भारतीय पक्ष यसअघि गरिसकेको सहमतिबाट समेत पछाडि हटेको छ। यसले नेपालको विद्युत् व्यापारको अपेक्षालाई अनिश्चित बनाइदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
← आज मात्र नेपालमा यति धेरै कोरोना संक्र’मितहरले कोरोना संक्र’मणबाट ज्या’न गु’माए ।
दैब पनि कति नि,र्दयी आँखा नदेख्ने ४ छोराछोरी हुर्काउँदै आएका लक्ष्मणलाई फेरी अर्को व,ज्रपात →